Faah-faahin ka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay Qaraxa gaari ee Waaberi ka dhacay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Faah-faahin ka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay Qaraxa gaari ee Waaberi ka dhacay
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Khasaaraha ka dhashay qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay Degmada Waaberi, gaar ahaan meel ku dhaw Suuqa Beerta oo ah goob dadka ay si weyn ugu ganacsadaan.
Inta la og yahay ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhintay qaraxaasi oo dhamaantood ahaa dad shacab ah, kuwaasi oo u badnaa dadkii ku ganacsanaayay hareeraha wadada, kuwaasi oo iibinaayay Khudaarta, Khaadka iyo Shaaha, maadaama meesha qaraxa uu ka dhacay ay aheyd laamiga dhexdiisa, dadkaana ay ku ganacsanaayay laamiga dhinaciisa.
Gaariga qarxay ayaa ilaa hada la kala saari la’yahay inuu yahay gaari Homy/Caasi ah iyo inuu yahay gaari NOHA ah, waxaana la arkay kaliya Laangaroonaha gaariga oo soo haray, maadaama intii kale qaraxa xoogiisa ay ku burbureen.
Ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay gaarigaan ka shakiyeen oo ay istaajiyeen, kadibna markii la arkay in la joojiyay gaariga uu sidaasi ku qarxiyay ruuxii waday, inkastoo Warar soo baxaya ay sheegayaan in la qabtay ruuxii waday gaarigaasi.
Madaxweynaha Somaliya oo ka qaybgalaayay furitaanka Xarunta Cilmiga iyo Tiknoolijiyada ee Jaamacada Umadda, kuna sugnaa wadada 21 October ah oo ah wadada uu qaraxa ka dhacay, ayaa sheegay ciidamada ammaanka inay ku guuleysteen qabashada ruuxii ka dambeeyay qaraxaasi.
Madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi dhacay, balse isaga oo Khudbeynaya ayaa macluumaadka Saraakiisha ammaankiisa qaabilsan u soo gudbiyeen waxa uu ahaa in la qabtay ruuxii qaraxa ka dambeeyay.
Ka sokoow hadalka Madaxweynaha ciidan ka tirsan kuwa Koofi gaduuda, ayaa la sheegay inay u xirneyd wadada xilliga uu qaraxa dhacaayay, waxaana la sheegayaa ciidamadaasi qaar ka tirsan inay ku dhinteen qaraxa.
Gaadiidka Ambalaaska ayaa dhaawacyo fara badan geeyay Isbitaalak Madiina, halkaasi oo dadka dhibaatada soo gaartay lagu daaweynooyo.
Qaraxyada Ismiidaaminta ah ee Muqdisho ka dhaca ayaa dhibaatada ugu badan waxa ay ka soo gaarta dadka shacabka ah.
Faah-faahin ka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay Qaraxa gaari ee Waaberi ka dhacay was last modified: November 27th, 2016 by warsan radio
Madaxweyne Xasan oo qiray qaladaad inay ka jiraan Doorashooyinka